Adblock Plus Inomira Cryptocurrency Mining | Linux Vakapindwa muropa
Nyaya yeiyi nzira yekuchera macryptocurrencies kuburikidza nemushandisi kungoshandisa webhurawuza ravo haina kupera, se zvakakanganiswawo inozivikanwa Chrome web browser uye kunyanya nekushandisa iyo SafeBrowse yekuwedzera.
Pashure iyo yazvino kuvandudzwa yekuwedzera, iyo inosanganisirwa nenzira yakavanda mukati mekodhi fuente, kubatana kunzvimbo ye cryptocurrency kuchera, mari-mukoko.
Aya kesi akaongororwa nevanhu vakasiyana vakanganiswa, sezvo zvaive zvisina musoro kwavari kuti nekungoshandisa bhurawuza, kushandiswa kwayo kwaizodarika zvinopfuura makumi mashanu kubva muzana zvezvinhu zvechikwata uye nezvimwe kana vaine mamiriro- the-art timu.
Izvo zvinogona kunzwisiswa rutsigiro rwekusimudzirwa kwemapurojekiti, asi kushandiswa kwezviwanikwa pasina mvumo yemushandisi hakuna kumboitika. Ichi ndicho chikonzero chakakurumbira kushambadza chishandiso Adblock Plus anopinda muhondo yekumisa kushungurudzwa uku.
Adblock Plus uye inokutendera kuti iwe ugadzire firita yekuvharira zvinyorwa senge Coinhive. Isu tinongofanirwa kuisa kumisikidza kwayo uye nekuwedzera firita nyowani ine zvinotevera:
1 Bvisa kuchera muChannel
2 Bvisa kuchera muFirefox
Bvisa kuchera muChannel
Mu Chrome tinofanira kuita wechipiri tinya pane iyo Adblock Plus icon nesarudzo ye setup, tabo nyowani ichavhura uye muchikamu wedzera mafirita ako, pano tichaisa zvaunotaura pamusoro.
Bvisa kuchera muFirefox
Mukati meFirefox tinonyora mubara rekero mhirizhonga: addons wobva wadzvanya bhatani reKusarudza padhuze neAdblock Plus.
Kuve mune kumisikidzwa kweizvi isu tinotsvaga iyo Firita Zvaunoda sarudzo, muhwindo idzva tinya pane iyo tsika mafirita tebhu, gadzira boka idzva uye tinobvuma wedzera firita.
Nezve izvo zvenguva yatingave nechokwadi chekuvharira script, zviri pachena kuti pachave nenzira nyowani dzavanoshandisa kushandisa nzira iyi yekuchera, chandingakurudzira ndechekuziva zviwanikwa zvinoshandiswa nebrowser.
Kana iwe ukaona chimwe chinhu chisinganzwisisike kana uchishandisa izvi kana paunopinda pane imwe webhusaiti, zvingave zvakanaka kushandura bhurawuza rako, kwete kuwana iyo webhusaiti.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Adblock Plus inononoka kudzikira kwemigodhi ye cryptocurrency
: Kana mumwe munhu achiri kushandisa ABP ?? !!! Poop, yakaipa, bvisa icho uise uBlock0.
Kune izvo zvakauya, apo ini pandakaziva nezve TPB uye mari-mukoko, chinhu chekutanga chandakaita kuenda kuwedzera iro dura kune iroB0 rondedzero, asi zvinoitika kuti raive ratovepo;)